मेयर साहबलाई खुल्ला पत्र - NepaliEkta
1426 जनाले पढ्नु भयो ।
यति बेला नेपाल कोरोना टु स्टेपमा छ । हामीले सतर्कता अपनाउन सक्यौ भने धनजनको सुरक्षा गर्न सक्छौं । अझै समय छ, हामीले सतर्कता अपनाउनै पर्छ । यहि सुझाव सहित मैले आजको स्तम्भमा नगरपालिका मेयर साहबलाई खुल्ला पत्र लेख्ने सोंच बनाएको छु, जसरी पनि उहाँको कानसम्म पुर्याई दिनु होला ल….
आदरणिय मेयर साहब,
जय नेपाल, लाल सलाम, नमस्ते, अभिवादन !
यतिबेला संचो विसंचो सोध्ने फुर्सत छैन, पुरै देश लकडाउनमा छ । सबै तिर ठप्पै छ, यस्तो विषम परिस्थितिमा मिठा र चिफ्ला कुरा गरेर मलाई तपाईको प्यारो बन्नु छैन । कुरा घुमाएर चपाएर निचोरेर बोल्न पनि जान्दैन । त्यसैले म सिधै बिषयमा कुरो कोट्याउँछु ।
यतिबेला तपाईको जिम्मेवारी के हो ? बिर्सिनु भयो भने हाम्रो गाऊँ समाजले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । तपाईले भोट र सपोर्टको लागि हेलच्याक्राई किन गर्नु भाछ ? कोरोनामा राजनीति गर्न तपाईलाई लाज सरम छैन ? बाहिरबाट गएहरू लुखुर लुखुर गाउँभरी डुलिरा छन्, तिनीहरूलाई १४ दिन क्वारेन्टाईममा नराखेर कस्तो खालको जिम्मेवारी वहन गर्दैहुनु हुन्छ ?
यो लापरवाहीले तपाईलाई पनि छोड्ने छैन, कोरोना कुन पार्टिको सोधेर आउँदैन । त्यसैले समाजमा भद्दा मजाक बनेर नाटक नगर्नुस । यो खेलवाड गर्ने समय होइन । ति गाउँमा रगरगी हिंडेका लफंगाहरू जो बाहिरबाट आएका छन् उनीहरूलाई तुरून्तै समातेर क्वारेन्टाईनमा कोच्नुस् । यो पत्रलाई कोरोनाको धम्की ठान्नुस या सुझाव तुरून्तै कार्यन्वयनमा जानुस् । अन्यथा समाज देशमा हुने सम्भावित हाहाकार नोक्सानीको जिम्मेदार तपाई आफै हुनुहुनेछ । म धेरै बोल्दैन हजुरलाई थाहै छ, अहिलेलाई कलम बन्द ।
← कथा : संकट
माफी दिनै नसकिने क्रुरता →
कथा : औजार
10 July 2020 Nepaliekta 0
हेमराज र सुनिताको आवाजमा ‘सुतेर नबस जनता’